Hay’ada Wadooyinka Puntland oo xariga ka jartay Wadadii 4aad ee la dayactiray – SBC
Hay’ada Wadooyinka Puntland oo xariga ka jartay Wadadii 4aad ee la dayactiray
Posted by Webmaster on April 23, 2013 Comments
Gudoomiye kuxigeenka Ha,adda wadooyinka dowlada puntland ayaa maanta xariga kajaray buundadi afaraad ee dib uhabayn lagu sameeyo taasi oo kamid ah sideed buundo oo ay saamayn ay kuyeeshen daadad xoogleh oo kusoo rogmaday .
Waxana ay buundadaasi ay kutaala halka laga soo galo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari,xarig kajarida buundadaasi ayaa maanta waxa kasoo qayb galay goob joogna ahaa masuuliyiin ka kala socda Dowlada Hoose ee Boosaaso iyo waliba Rugta ganacsiga iyo warshadaha puntland.
Ugu horayn waxa halkaasi kahadlay Gudoomiye Kuxigeenka hay,adda wadooyinka puntland Siciid Maxamed Yuusuf oo isagu sheegay in lagu guulaystay dib udayacdirada Buundadaasi .
‘’Saddex kahoraysay buundadan horay ayaa loo furay maantana waxaanu furaynaa buundadan maalinta birri ahna saddex gale ayaa looguda galaya wax kaqabashadooda,buundadan lacagta kubaxday waxa ay gaaraysaa qiyaastii 13kun oo doolar kuwii kale ee kahoreeyana waxa kubaxay 63kun oo doolarka maraykanka ah ‘’Sidaasi waxaa yiri Gudoomiye kuxigeenka hay,adda wadooyinka puntland Siciid Maxamed Yuusuf.
Duq kuxigeenka dagmada Boosaaso siciid garoon ayaa isna halkaasi kahadlay sheegayna in uu aad ugu faraxsan yahay dib uhabaynta lagu sameeyay buundadaasi iyo waliba buundooyinki kale ee iyana lamidka ahaa ee lasameeyay .
‘’Buundooyinka tan xigana waa ladhagx dhigaya sida tan loosameyayna ayaa loosamaynayaa sided buundo ayay ahaayen waxay xiligaan kudhowyihiin dhamaystir wixii wax laga qabto maraagan soomalida waxay tiraahda fadhi baalagu radaa socod lagama raago runtiina aad baan ugu mahadcelinayna masuuliyiinya hay,adda wadooyinka puntland’’
Gabagabadii munaasibadasi waxa isna halkaasi kahadlay Maxamed Caydiid oo ah gudoomiye kuxigeenka Rugta ganacsiga iyo warshadaha dowlada Puntland oo fariin ujeediyay dhamaanba ganacsatada reer puntland taasi oo ku aadan kaqayb galka dib uhabaynta wadooyinka deeganada puntland oo xiligaan hay,adda wadooyinka puntland ay kuhowlantahay .
Buundadan ayaa noqonaysa buundadii afaraad oo lahagaajiyo kadib markii ay daadad xoogleh ay kusoo dhaceen qaar kamid ah buundooyinkaasi .